Moe Kai: Under Performance Syndrome
ပုံမှန် အရွယ်ရောက် လူတယောက်မှာ အိပ်ချိန်ကလဲ ပျမ်းမျှ ၇-နာရီ (၆နာရီ မှ ၈နာရီ) ရှိသင့်ပါတယ်။ သုတေသတနပေါင်း များစွာရဲ့ အဆိုအရ ရေရှည် အိပ်ရေးလုံလောက်မှု မရှိတဲ့သူတွေမှာ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါတွေ ဖြစ်ဖို. ပို်များပြီး၊ အဲဒီထက် နာရီပေါင်းများစွာ ပိုအိပ်တဲ့ သူတွေမှာလဲ သေနှုန်းက ပိုများပြန်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် သေနှုန်းပိုများတာလဲ ဆိုတာတော့ မသိပါ။ အဓိက ဘယ်နှစ်နာရီ အိပ်တယ်ဆိုတာထက် အိပ်မက်ဆိုးတွေနဲ. အိပ်လိုက် နိုးလိုက် မဟုတ်ဘဲ တကယ် quality ကောင်းတဲ့ အိပ်ချိန်မျိုးရဖို.က ပိုအရေးအကြီးပါတယ်။ ပြောတော့ လွယ်တယ်၊ ဒီလို အိပ်ချိန်မျိုးရအောင် ဘယ်လို လုပ်ရပါ့မလဲပေါ့။ အိပ်ခါနီး ဟိုတွေးဒီတွေး သိပ်မတွေးပါနဲ.။ အိပ်ယာခန်းထဲ TV ထားပြီး TV ကြီးဖွင့်ပြီး မအိပ်ပါနဲ.၊ အရက် ကော်ဖီ ကိုကာကိုလာ ဆိုတာတွေကလဲ ဦးဏှောက်ကို လှုံ.ဆော်တတ်တာကြောင့် ညဘက်ကို မသောက်နဲ.ပေါ့နော။
တခါတလေ စိတ်ပူစရာ စိတ်ဖိစီးတာတွေ များပြီး အိပ်ရေးမဝ ဖြစ်နေရင် ကျမတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်မေးခွန်းထုတ်ရပါတယ်။ “ငါ အခုလို ပူနေတော့၊ ဘာပြောင်းလဲမှု ရှိနိုင်မလဲ” ဆိုတာပါ။ ပူတာတွေကို တတ်နိုင်သလောက်လျှော့ပြီး အားကစား နဲနဲလောက်လုပ်ကြည့်ပါ။ နေ.စဉ်လို လမ်းထွက်လျှောက်၊ လေကောင်းလေသန်.ရှူ ပေးကြည့်ပါ။ အားလုံး ပိုစိတ်ပျော်ရွှင်လာလိမ့်မယ်လို. ကျမထင်ပါတယ်။
ကျမလဲ ဒီတပတ်လုံး အိပ်ရေးကမဝ ပင်ပန်းနေတာနဲ. စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များလာတာနဲ. ဒီ စနေ တနင်္ဂနွေတော့ ကောင်းကောင်း အနားယူပြစ်မယ်၊ ခန္တာကိုယ် ပြန်လန်းဆန်းလာအောင် လုပ်မှဖြစ်တော့မယ် အားခဲထားတာပါ။ အခု အားကစားပွဲ တခု ကိစ္စကပေါ်လာတော့ သွားရပြန်ဦးမယ်။ ဒါပေမယ့် ကို်ယ့်ကိုယ်ကို ကတိပေးမိတာက ပူတာတွေလျှော့ပြီး အိပ်ရေးဝအောင် ပြန်အိပ်တော့မယ်လို. ပါ။